Online Burma Library > Reading Room > News - Private sector publications produced under censorship restrictions > Weekly magazines > "Weekly Eleven" > "Weekly Eleven" (Burmese) 2012/ မြန်မာဘာသာ
Home > Reading Room > News - Private sector publications produced under censorship restrictions > Weekly magazines > "Weekly Eleven" > "Weekly Eleven" (Burmese) 2012/ မြန်မာဘာသာ
Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.19, February 8, 2012/ "Weekly Eleven မြန်မာဘာသာ၊အတွဲ ၇-အမှတ် ၁၉- ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈ - ၂၀၁၂
Description/subject: လက်ရှိ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၌ စစ်သားအင်အားလူဦးရေ တစ်သန်းမရှိသော်လည်း လက်ရှိ အခြေအနေအရ အမျိုးသား စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို ကျင့်သုံးရန် မလိုအပ်... လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချု့် အပါအ၀င် ၁၉ ပါတီ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်... မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဒီမိုကရက်တစ် အကူးအပြောင်းတါင် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ် အဖြစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံ တကာ စောင့် ကြည့် လေ့လာသူများ ခွင့်ပြုရန် အမေရိကန် တိုက်တွန်း... စင်ကာပူနိုင်ငံ မှ ဘဏ်၊ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းများ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီ ၆၀ ကျော် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ရင်နှီး မြှပ်နှံရန် လာရောက်မည်... လာမည့်၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အသုံးစရိတ်ကို လေးဆနှင့်ပညာရေးကဏ္ဍ အသုံးစရိတ်ကိုနှစ်ဆတိုးကာ လျာထား သုံးစွဲသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးပြောကြား... ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးခွင့် စသည့် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများ ကိုလေးစား လိုက်နာရမည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စား လှယ် Tomás Ojea Quintana ပြောကြား... ၈၈ မျိုးဆက်နှင့်၂ဝဝ၇ မျိုးဆက်ကျောင်းသား များအား ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စား လှယ် တွေ့ဆုံ... မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသော အမေရိကန်၏ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု များကို ဖယ်ရှားပေးရန် စင်ကာပူတိုက်တွန်း... ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသားများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း NLD မှထပ်မံစာရင်းပေးလာပါက ထပ်မံလွှတ်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား... မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဟိုတယ်နှင့် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၉၇ ဒသမ ၇၅၆ သန်းဖြင့် ထိပ်ဆုံး၌ရှိနေ... ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ အသုံးပြု မည့်ရေ အတွက် ရေကာတာဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်... ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားနှစ်သိန်းကျော်မှာ နိုင်ငံသားစိစစ်မှုလုပ်ငန်းတွင်မပါဝင်ပါက ပြည်နှင် ခံရဖွယ်ရှိ... မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းအတွင်း ကုန်တင် သင်္ဘောများ သွားလာနိုင်ရန် ပထမ အကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး... ကမ္ဘာ့ရေတိမ်ဒေသ များနေ့ အထိမ်းအမှတ်နှင့်မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ အား Ramsar Site အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ... ဘင်လာဒင်ကိုနှိမ်နင်းရာတွင် အမေရိကန်ကို သတင်းပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်အား တရားစွဲဆိုရန် သင့်၊ မသင့် မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း ပါကစ္စတန်အစိုးရပြောကြား... ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖားစည်သံ...
Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.18, February 1, 2012/ "Weekly Eleven မြန်မာဘာသာ၊အတွဲ ၇-အမှတ် ၁၈- ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ - ၂၀၁၂
Description/subject: လာမည့် ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ခြောက်ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်က အာရှဒေသ၏ စီးပွားရေး မျက်နှာစာ သစ် တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည် ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ သုံးသပ်... လွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန် အစည်းအဝေးများ၌ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အဓိက ကျမည်... မြန်မာနိုင်ငံ ၌ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများသို့ စိုက်ပျိုးရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လုပ်ခွင့် ပေးထားသည့် မြေဧက ၁ ဒသမ ၇၅ သန်း ရှိ၊ ၂၀ % ကိုသာ အမှန်စိုက်ပျိုးပြီး ကျန်မြေများကို မြေဈေး ကစားခြင်း၊ သစ်ထုတ်ခြင်း နှင့် လက်ဝယ်ရယူထားခြင်းများ ပြုလုပ်ဟု သိရ... ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း တိုင်ကြားခဲ့သည့် လိမ်လည်မှုဖြစ်စဉ် အများစု မှာ မော်တော်ယာဉ်၊ မြေကွက်နှင့် ပါတ်သက်သည့် အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ကြောင်း သိရ... ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဒါးဗို့စိတွင် ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ညီလာခံသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီဒီယို မိန့်ခွန်း ပေးပို့ ... သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သန်လျင်၊ သုံးခွနှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်တို့၌ အသေးစားချေးငွေ ကိစ္စရပ် များဆောင်ရွက်... ယနေ့အထိ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ငါးဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတပြော ကြား... ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တွင် တပ်မတော် ပါဝင်ရန် လိုလားကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ဒုတိယ အကြိမ်တွေ့ဆုံ... ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ တတိယ အကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်နေ... အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံမှ အရန်ဆန်တန် ချိန်နှစ်သိန်းအား ဝယ်ယူရန် MoU ရေးထိုး... ပြည်ပငွေလွှဲ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရသော ပြည်တွင်းဘဏ် အချို့ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လုပ်ငန်းစတင်မည်... ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအား ရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်၍ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၏သဘောဆန္ဒအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြု လုပ်နိုင်ကြောင်း နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ပြောကြား... မြန်မာနိုင်ငံသို့ တစ်နှစ်တာ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုမှ ဝင်ငွေ အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၃၁၉ သန်းရရှိ... ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ အပါအဝင် ရှေးဟောင်းမြို့တော် များအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံ ရရေးဆောင်ရွက်နေ...WiMAX အင်တာနက်လိုင်း ကို ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကျပ်သုံးသိန်းခွဲ ခန့်ဖြင့်တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မည်... Global Fund အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇ဝဝ ကျော် ဘီလ်ဂိတ်လှူဒါန်းမည်... ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြည်သူလူထုအား အသိပေးရန်အတွက် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်းန် twitter စတင်သုံးစွဲ... မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ်လမ်းမကြီးဝဲယာရှိကျေးရွာများမှ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာမြေများတွင် နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် မှုကြောင့် ဒေသခံများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးလာ...
Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.17, January-25, 2012/ "Weekly Eleven မြန်မာဘာသာ၊အတွဲ ၇-အမှတ် ၁၇- ဇန္န၀ါရီ ၂၅ - ၂၀၁၂
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သင့်ပြီလား မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍ ၂၀၁၂ မှာ အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲရတော့မည်... အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်း အပါအ၀င် အထက်လွှတ်တော် အမတ်လေးဦး မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်... မြန်မာနိုင်ငံ၌ လယ်သမားများထံမှ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ သို့ လွှဲပြောင်း ပေးသောမြေ ဧက တိုးလာ... မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ရေ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု ကမ္ဘာတွင် အဆင့် (၁၄) ရှိပြီး အာရှ ဒေသနိုင်ငံများတွင် အဆင့် (၅) တွင် ရှိ၊ ရှိပြီးသော ရေ အရင်းအမြစ်မျာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ဥပဒေ တစ်ရပ် အခိုင်အမာ ပြဌာန်း ရန်လိုအပ်နေကြောင်း ပညာရှင်များ သုံးသပ်... ပြည်တွင်း အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများ သို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အထည် အော်ဒါ မှာ ယူမှုတွင် လတ်တလော၌ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အများဆုံး ဖြစ်နေ...၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်... ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထူးအစည်းအဝေးပြုလုပ်... ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်KIOကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီ၌ နှစ်ရက်ကြာတွေ့ ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးနောက် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်... ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက် အလေး ထားရှေ့ ဆက်ဆောင်ရွက် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတပြော ကြား...အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကျစ်လျစ်ခိုင် မာတောင့်တင်း ရန် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း... လူငယ်ကျောင်းသား မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်ကိုကို နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း... မြန်မာဘဏ် အားလုံး ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမည့် Myanmar Payment Union စနစ် ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်မည်... နိုင်ငံခြားငွေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်လေးခု ပြည်ပနိုင်ငံ များ၌ ဘဏ်ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်နိုင်မှုမရှိသေး... ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်း များဖြေလျှော့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မူဆယ်နမ့်ခမ်း ကုန်သည်များ အသင်းမှ အချက်ငါးချက်ကို တင်ပြထား... ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ရုံနှင့် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း လေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံတစ်ရုံ တည်ဆောက်နိုင် ရန်စီစဉ်... မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၁၉ ဘဏ်အနက် ထက်ဝက်ကျော်မှာ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင် အပ်ငွေအာမခံထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရ... နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်များအား ကြယ်ပွင့်များ အဆင့်သတ်မှတ်၊ ကြယ်သုံးပွင့် ဟိုတယ် ၁၃ ခု၊ ကြယ်နှစ်ပွင့်ဟိုတယ် ခုနစ်ခုနှင့် ကြယ်တစ်ပွင့် ဟိုတယ် တစ်ခုရှိကြောင်း သိရ... နိုင်ငံတကာမှ ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များ ပါဝင်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ညီလာခံကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပမည်... သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ချိုင့ဝ်ှမ်းဒေသအတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သောငလျင်ကြီးများကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ထပ်မံတွေ့ရှိရ... ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ၌မြန်မာအလုပ်သမား အရာရှိတစ်ဦးအား တွဲဖက်တာဝန်ပေးအပ်မှု စတင်ပြုလုပ်...
Title: "Weekly Eleven" (Burmese), January-18, 2012/ "Weekly Eleven မြန်မာဘာသာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ - ၂၀၁၂
Description/subject: Freedom from Fear နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံရေး အနာဂါတ် ခရီး အတွက် အရေးပါသော ခွန်ထွန်းဦး၊ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင် ငံရေး ခေါင်းဆောင် များ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ... နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွင်း ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန် ပဏာမ သဘောတူညီချက် ငါးချက် လက်မှတ်ရေးထိုး... မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှုန်းထားအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲနှုန်းကို တစ်မျိုးတည်း အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ပေါင်းစည်းသွားမည်... တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်း ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေ... ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေသည့် အလှကုန်ပစ္စည်း အချို့ ၌ အရေပြားကင်ဆာအပါအ၀င် အရေပြား ရောဂါများဖြစ်နိုင်သော တာမြစ်ထားသည့် ဟိုဒရိုကွီနုန်းအမည်ရှိ ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိ...
Title: "Weekly Eleven" (Burmese), Vol.7 - No.15, January-11, 2012/ "Weekly Eleven မြန်မာဘာသာ၊အတွဲ ၇-အမှတ် ၁၅- ဇန္န၀ါရီ ၁၁ - ၂၀၁၂
Description/subject: ပြည်ပပို့ကုန်ဈေးကွက်နှင့် အတူ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ငြိမ် သက်နေ- ပြည်ပရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ ပြည်တွင်း ရှိ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု အနေအထားများအား စောင့်ကြည့်နေဆဲ... ကန့်သတ်ကုန်များ သွင်းခွင့် ပြုပေး၍ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ကုန်ဆုံးရန် သုံးလလိုသည့် အချိန်၌ပင် သွင်းကုန်ပမာဏ သမိုင်း တစ်လျှောက် စံချိ်န်တင်မြင့်တက်... မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပို့ကုန် ကဏ္ဍ တွင်မူ ငွေလဲ နှုန်းကာရှည် ကျဆင်းမှု ကြောင့် အခြေခံ ကုန်ထုတ်လုပ်သူများပင် အထိနာနေ... မြန်မာ တရုတ် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သို့ ရောင်းချမည့် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသရှိ ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်မှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များကို ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် ခွဲဝေ သုံးစွဲ ခွင့် ရရှိ... ၁၉၅၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးလာရောက်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး အဖြစ် ၀ီလျံ ဟိတ်ခ်ျ လာရောက် ... ကျန်ရှိနေသည့် ယုံကြည်ချက် ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ လွှတ်ပေးရန် နှင့် ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများဆက်လက် ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်း... အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ Standard Chartered ဘဏ်အပါအ၀င် ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် ဘဏ် အချို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ရန်ပြင်ဆင်...
Title: "Weekly Eleven" (Burmese),Vol. 7- No. 14- January- 4, 2012/ "Weekly Eleven မြန်မာဘာသာ၊အတွဲ ၇- အမှတ် ၁၄- ဇန္န၀ါရီ ၄ - ၂၀၁၂
Description/subject: ထင်ရှားကျော်ကြား ၂၀၁၁... Person of the Year နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်... မြစ်ဆုံ အရေးကိစ္စနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်... နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှု.... အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရရှိခြင်း... အမေရိကန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် လာရောက်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အ၀ိုင်း သို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်ခြင်း ... အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အခန်းကဏ္ဍ... လွှတ်တော်အတွင်း ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးမှု ပိုမိုပီပြင်လာသည့် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးများ... ပြည်သူ့ လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီက မီဒီယာများနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံ...